မိုးတိမ်၏ ဘာညာသာရကာ နေကြာ ကွာစိ: March 2007
Adobe ဟာ အဆင့်မြင့် ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ နာမည်ကြီးချမ်းသာလာတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်ကြီး Application ဖြစ်တဲ့ Photoshop, Illustrator, Acrobat, Premier Pro စတဲ့ Software တွေကို လူသုံးများပါတယ်။ အခုဆိုရင် Adobe ဟာ သူ့ရဲ့ CS3 Package ကိုဈေးကွက်ကိုတင်ဖို့ တာစူးနေပါပြီ။ Amazon.com မှာ ရောင်းချမယ့် ဈေးနှုန်းတွေတောင် သိနေရပါပြီ။ CS3 Package မှာ Software ပေါင်း ၂၁ မျိုးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင် Micromedia ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Flash, Firework, Dreamwaver ကိုပါ။ Adobe က နည်းပညာဝယ်ယူပြီး CS3 Package မှာ ထည့်သွင်းထုတ်လုပ် ထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Interface တွေဟာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ် ဆိုတာကိုတော့ မသိသေးပါဘူး။ လောလောဆယ် Adobe က Photoshop ကိုပဲ Beta Version အဖြစ်ပေးထားတာပါ။ ဈေးနှုန်းတွေကတော့
Adobe Creative Suite CS3 Master Collection = $2499,
Adobe Creative Suite CS3 Web Premium = $1599,
Adobe Creative Suite CS3 Design Premium = $1599 နဲ့
Adobe Creative Suite CS3 Production Premium = $1199 အသီးသီးတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီထုတ်ကုန်အများစုကို April 20 ရက်နေ့လောက်မှာ ထွက်မယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Master Collection အတွက်ဆိုရင် July လ အထိစောင့်ရလိမ့်မယ်လို့ မှန်းဆကြပါတယ်။ Adobe က ဒီတစ်ခါ သူတို့ ထုတ်ကုန်အသစ်ထုတ်လုပ်မှုဟာ သူတို့ထုတ်ကုန်သမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံးနဲ့ အများဆုံးပဲလို့ပြောပါတယ်။ စုစုပေါင်း Software ၂၁ မျိုးကြီးတောင်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလူမျိုးက ဒီလောက်အများကြီး ၀ယ်သုံးမလဲ မသိဘူးနော်.....
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 2:00 PM0comments
ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရဲ့ Temporary files တွေကို ရှင်းဖို့ မေ့နေ တတ်တယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း နားမလည်လို့။ Temp Files ဆိုတာ Computer Application/System Operations တွေလုပ်တဲ့အခါ Hard Disk ပေါ်မှာ ယာယီသိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်မျိုးတွေပါ။ အဲ့ဒီဖိုင်တွေ များလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ရဲ့ Hard Disk Space ပေါ်မူတည်ပြီး စက်ဟာ လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကျသွားနိုင်တယ်။ Computer အသုံးပြုရတာ နှေးကွေးလေးလံသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Temp Files တွေကို ကိုယ်အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်ပြီး ရှင်းလင်းသင့်တယ်။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်ကွန်ပျူတာဟာ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ချောမှာပေါ့။ Temp Files တွေကို Manual ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Window+R (Start Menu က Run) ကိုနှိပ်ပါ။ Run Box တက်လာရင် %tmp% လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် Temp Files တွေပါတဲ့ Window ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ Window ထဲကရှိသမျှဖိုင်တွေကို Shift+Delete နဲ့ ရှင်းလိုက်ပါ။ တစ်ချို့ဖိုင်တွေကို ဖျက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ System က ယူသုံးနေတယ်လို့ Error တက်လိမ့်မယ်။ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါ။ ဒီထက်ပိုပြီး Temp ဖိုင်ကို ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် My Computer ရှင်းချင်တဲ့ Drive ကို Right Click နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Properties ကိုရွေး။ Dialog Box ပေါ်လာရင် အောက်နားက Disk Cleanup ဆိုတဲ့ Button လေးကိုနှိပ် Dialog Box ထပ်ပေါ်လာရင် List ထဲမှာ ကိုယ်ဖျက်ချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို Check လုပ်။ ပြီးရင် OK နှိပ်။ ခဏလေးစောင့်လိုက်။ ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ အဲ့ဒါတွေမလုပ်ချင်ဘူး ... ပျင်းတယ် ဆိုရင် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းပေးမယ့် အခမဲ့သုံး Software လေးရှိတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ CCleaner လေးပါပဲ။ အခမဲ့သုံးလို့ရသလို Powerful လည်းဖြစ်တယ်။ ခုနကလို Temp Folder ထဲမှာ ဖျက်လို့မရတဲ့ ဖိုင်တွေကိုပါ ရှင်းလင်းပေးတယ်။ ပြီးတော့ Application Temps, Internet Temp Files, System Temp Files တွေကိုပါ ရှင်းပေးတယ်။ နောက်တစ်ခုက Registry Issue လုပ်လို့လည်းရတယ်။ အရမ်းမြန်ပြီး အရမ်းကောင်းတယ်။ ကိုယ့်စက်ထဲက Temp Files တွေကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရှင်းလင်းပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းထက် Tool လေးတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tool လေးတစ်ခုပါပဲ။
CCleaner ကို Download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 10:28 AM0comments
ဦးပိုင်က စားအုန်းဆီတွေ .. ၁ ပိဿာ ၁၅၆၄ ကျပ်နဲ့ အလကား ရောင်းပေးမယ် ....
လမ်းထိပ်က ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ “စားအုန်းဆီ .. ၁ ပိဿာဈေး ၁၅၆၄ ကျပ်” တဲ့ .. ဆိုင်းဘုတ် အကြီးကြီးနဲ့ရေးထားတယ်။ သေချာကြည့်လိုက်တော့ “မြန်မာနိုင်ငံ ဆီကုန်သည်နှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း” ဆိုတော့ ဦးပိုင်ကပဲပေါ့။ အင်း .. အပြင်မှာ ၂၂၀၀ ဈေး။ ဒီမှာက ၁၅၀၀ ကျော်ဆိုတော့ အများကြီးသက်သာတယ် .. ငါလာဝယ်ဦးမှ။ အခုတစ်လော အပြင်က စားဆီတွေကို ပုဂ္ဂလိကကုန်သည်တွေက အခြားဆီအမျိုးမျိုးနဲ့ ရောရောင်းတာကြောင့် စားသုံးသူပြည်သူတွေ ရောဂါတွေ ရနေကြတယ်လို့ သတင်းမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ မသမာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ စီးပွားရှာကြတဲ့ ကုန်သည်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေလေ။ လောကကြီးက တစ်ဖြည်းဖြည်း ကြောက်စရာကောင်းလာပြီ။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်။ ဆီတွေက မနက်ဆိုရင် ခဲနေပြီ .. ဟင်းချက်ဖို့ကို သူ့ကို အရင်ဦးဆုံး အရည်ပျော်အောင်လုပ်နေရတယ်။ ပဲဆီကျတော့လည်း ကျွန်တော့်လို သာမာန်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က မကပ်ရဲဘူးဗျာ့။ စားဆီ ၂၂၀၀ ဈေးမှာ ပဲဆီက ၃၃၀၀ ဈေးဗျ။ နောက်တော့လည်း ရောဂါကိုကြောက်ပြီး ပဲဆီမှာ ကျိတ်မှိတ်သုံးရတော့တာပေါ့။ ဒီနေ့ ဒီဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့လိုက်တော့ တစ်ပိဿာလောက်တော့ ဆွဲထားမယ်ဆိုတဲ့အတွးနဲ့ အိမ်မှာ ပုံးသွားယူပြီး လမ်းထိပ်ကဆိုင်ကို ပြန်ပြေးတာပေါ့။ ဆိုင်ရောက်တော့ .. “အန်တီရေ .. ကျွန်တော့ကို စားဆီ ၁ ပိဿပေးပါ”
“အေးအေး .. ” ဆိုပြီးချိန်ခွက်နဲ့ ချိန်ထည့်ပေးတယ်။
ပြီးသွားတော့ ကျွန်တော့က ပိုက်ဆံကို ၁၆၀၀ ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ အန်တီကြီးက ကျွန်တော့ကို ပြန်ကြည့်တယ် .. အန်တီ အကြွေမရှိလို့လား .. ရတယ် .. မအန်းနဲ့တော့ .. နေပါစေ”ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။ ဒီတော့ အန်တီကြီးက
“ကောင်လေး .. ဆီက ၁ ပိဿာ ၂၀၀၀ လေ .. ခုက ၁၆၀၀ ပဲရှိသေးတယ် .. ၄၀၀ ထပ်ပေးရဦးမယ်” ..
“အမ် .... ဒီမှာ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ရေးထားတာ .. ၁၅၆၄ ကျပ်လေ ... ဘာလို့ ၂၀၀၀ ဖြစ်သွားတာလဲ ...”
“အဲ့ဒါက တစ်ယောက် ၁၀ သားပဲရတာ .. ၁ပိဿာမရဘူး .. ဆိုပြီး .. ဘုပြောတယ်”
ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ခံမလဲ .. ကိုယ်က မှန်နေတာကိုး ... “ဒါဆိုရင် .. ၁၀ သားဈေးရေးပေါ့ .. ဒါမှမဟုတ် . အောက်မှ မှတ်ချက်လေး ဘာလေးရေးပေါ့ဗျာ .. လူတစ်ဦးကို ၁၀ သားသာ ရောင်းပါသည်လို့ ..ခုဟာက တစ်ပိဿာဈေးရေးထားပြီးမှ .. အမျိုးမျိုးပဲဗျာ .... ကျွန်တော်တို့ စားသုံးသူတွေ စာတတ်ပါတယ်ဗျ ....” ဆိုပြီး ၄၀၀ ထုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဆီးဗုံးဆွဲပြီး အိမ်ပြန်တာကလွဲလို့ ကျွန်တော့မှာ လုပ်စရာမရှိ ..... နောက်မှာတော့ ..“နင်ကများ .. ရာရာစစ ... %$%#^#&^&#%E%##$” စတဲ့အသံပေါင်းစုံနဲ့ အန်တီကြီး ကျန်ခဲ့လေရဲ့။ လုံးဝကို မကျေနပ်ဘူးဗျာ .... “ဘာဖြစ်လို့ စားသုံးသူ ပြည်သူတွေကို လိမ်လှည်နေကြတာလဲ”။ အဲ့ဒီလို ဘ၀ကနေ ဘယ်အချိန်ကျမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြမှာလဲ။ ကျွန်တော့် တော့ပစ်ခေါင်းစဉ်ကို “ဦးပိုင်က စားအုန်းဆီတွေ .. ၁ ပိဿာ ၁၅၆၄ ကျပ်နဲ့ အလကား ရောင်းပေးတယ် ....” လို့ပေးလိုက်တာပါ။ တကယ်မရောင်းပေးဘူး .. အလကားရောင်းပေးတာ ... ဘာပဲပြောပြော အဲ့ဒီနေ့က အပြင်ကထက်တော့ ၂၀၀ သက်သာခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ..
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 11:53 AM0comments
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 10:25 AM0comments
လူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို မတင်းတိမ်တတ်ကြပဲ ၊ မရနိုင်တဲ့ အဆင့်အတန်းကိုပဲ အထင်
People are not satisfied with their own position in life and are always aiming too high.
Adobe ကနေပြီး ထုတ်လုပ်မယ့် CS3 ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ Icon တွေကို ... Color Wheel နဲ့ ပြသထားတာကို Surfing လုပ်ရင်းတွေ့လို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။ တစ်ချို့  ထုတ်ကုန်တွေ ဘာမှန်းတောင်မသိဘူး။
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 4:40 PM0comments
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 2:54 PM0comments
MBlogger Forum ပေါ်မှာ ကို CMS က User Bar Generator Site တစ်ခုပေးထားတယ်။ ကျွန်တော် ၀င်သုံးကြည့်တော့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ အသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်လို့ ရတယ်။ အဲ့ဒီမှာ Member တွေဆွဲထားတဲ့ User Bar တွေကိုလည်း Download လုပ်လို့ရသလို။ ကိုယ်ပိုင်တစ်ခု ကိုလည်း ပြုလုပ်လို့ရတယ်။ အဲ့ဒီလိုဆွဲချင်ရင် ဒီကိုနှိပ်ပါ။ အဲ့ဒီမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ကိုယ်စိတ်ကူးရှိသလို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်လို့ရတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်.. Size ကိုတော့ ပြင်လို့မရဘူး။ သူ့ Default အတိုင်းပဲ လုပ်လို့ရမယ်။ ပြီးတော့ Scroller Layer ဆိုပြီး ပြုလုပ်ချက်အသစ်ကို စမ်းသပ်လို့ရတယ်။ သူကတော့ ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် User Bar ကို Scroller Animation ထည့်လို့ရတယ်။ စမ်းကြည့်ကြပါ။ ဥာဏ်ရှိသလို သုံးလို့ရပါတယ်။
တစ်ချို့ တစ်ချို့  ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်..
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 10:53 AM0comments
သွားရင်း လာရင်း .. ခလုတ်တိုက်လို့ ရောက်ခဲ့တယ်... Myanmar Blogger Community တဲ့ဗျာ .. Myanmar Blogger တွေ စုဝေးစေမယ့်နေရာလို့ထင်မိတယ်။ ယူဇာကတော့ နည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်။ ကဲ .. အားပေးလိုက်ပါဦး ... Myanmar Bloggers Forumers ......
မြန်မာ ဘလော့ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေ ကိုလည်းတောင်းခံနိုင်တယ်။ ကိုယ်သိတာတွေကိုလည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း နဲ့တင်ပြလို့ရတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ သိတာလေးတွေကို အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး Share ကြရင်း .. စကားလက်ဆုံကျလို့ရတာပေါ့ ... Myanmar Blogger Community
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 4:16 PM0comments
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 2:42 PM0comments
ဒီနေ့ ညနေ ၅နာရီမှာ .... နေပြည်တော်မြို့ .. မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီ ရွှေစင်ရုပ်ထုပေးပွဲကို ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိသလောက အခုဆိုရင် .. ရုပ်ရှင်မင်းသား/မင်းသမီး/အဆိုကျော်/မော်ဒန် တွေအားလုံးနီးပါး .. နေပြည်တောာာ .. အဲလေ .. နေပြည်တော် ကိုရောက်နေပါပြီ ..........
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 2:36 PM0comments
တပေါင်းလပြည့်နေ့ .. ရုံးပိတ်လို့ ရွှေတိဂုံဘုရားသွားဖူးဖြစ်တယ်။ ရုံးပိတ်ရက် ဘုရားပေါ်မှာ လူတွေဟာ အရင်ကလောက် မစီတော့ဘူးလို့တောင် စိတ်ထဲကထင်နေမိတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ် .. ဘုရားရှိခိုး .. ပုတီးလေးစိတ်လိုက်နဲ့ ဘုရားပေါ်မှာ ၃ နာရီလောက်ကြာသွားတယ်။ ဘုရားပေါ်က ပြန်ဆင်းတော့ လမ်းမတော်က အစ်မ၀မ်းကွဲအိမ်ကို ၀င်ဖို့စိတ်ကူးမိလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ရွှေပုဇွန်မှာ မုန့်လေးဘာလေး ၀ယ်သွားရအောင်ဆိုပြီး ရွှေပုဇွန်ကို သွားခဲ့တယ်။ ရွှေပုဇွန်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း လူတွေက များနေတယ်လေ။ ကိုယ်လိုချင်တာတွေကို ၀ယ်ပြီး ကောင်တာမှာ ငွေရှင်းဖို့သွားတော့ ... နောက်ကနေပြီး .... ၀င်တိုက်တာ ခံလိုက်ရတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ အထုပ်တွေ မနိုင်မနင်းနဲ့ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက် ... နည်းတဲ့ မုန့်ထုပ်တွေမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်က သူ့နောက်ကို ရောက်သွားတာပေါ့။ ပိုက်ဆံရှင်းဖို့ သူ့မုန့်တွေ Casher ကောင်တာပေါ် တင်လိုက်တာ ကောင်တာတောင် မဆံ့ဘူး။ အလိုလိုနေရင်း ကိုယ်ဝယ်တဲ့မုန့်ကိုကြည့်ရင်း .. အားတောင်ငယ်လာသလိုပဲ .. ;)။ ကျွန်တော်က နည်းနည်းလေးပဲဝယ်တာပါ။ ကိတ်မုန့်ရယ်.. တူ/တူမလေးတွေအတွက် ဂျယ်လီ .. ပြီးတော့ မုန့်လိပ်ပြာ .. စတာတွေပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ကိုယ့်ရှေ့က အဒေါ်ကြီး ငွေရှင်းပြီးမှ ရှင်းရမယ့်ပုံပေါက်နေပြီ။ တစ်ခြား ကောင်တာတွေကလည်း မအား။ ဒါနဲ့ပဲ .. Casher ကကောင်လေးက “အစ်ကို .. အစ်ကို့ဟာအရင်ပေး .. အရင်ရှင်းပေးလိုက်မယ်” လို့ပြောတော့ ကျွန်တော်ကလည်း အထုပ်တွေပေးလိုက်တယ် အဲ့ဒီမှာ ပြဿနာက စတော့တာပဲ ..... ကိုယ့်ရှေ့က အဒေါ်ကြီးက “ဟဲ့ .. ငါဒီမှာ အရင်ရောက်နေတယ်လေ .... ငါ့ဟာအရှင် မရှင်းဘဲ .. ဘာဖြစ်လို့ ကျော်ရှင်းတာလဲ.. စည်းကမ်းကို မရှိဘူး”လို့
Casher ကောင်လေးကိုပြောလိုက်တယ်။ ကောင်လေးက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပဲ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး “ဒီက အကိုဟာက နည်းနည်းလေးမို့ အရင်လုပ်ပေးလိုက်တာပါ . အန်တီ”
“ဟဲ့ ....နည်းနည်း များများ .. ငါလည်းပိုက်ဆံပေးဝယ်တာ .. သူလည်းပိုက်ဆံပေးဝယ်တာ .. ငါအရင်ရောက်တာ ငါ့ကိုအရင်လုပ်ပေး .. မလုပ်ပေးရင် .. ငါဒါတွေ မယူတော့ဘူး”လို့ပြန်ပြောတယ်....
ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်တာနဲ့ ...
“ညီလေး ရတယ်.. အရင်လုပ်ပေးလိုက်... အကို တစ်ခြားကောင်တာက သွင်းလိုက်မယ်” ဆိုပြီး တစ်ခြားကောင်တာမှာ သွားစောင့်ပြီးသွင်းလိုက်တယ်။
လောကကြီးရယ်..... တစ်ခါတစ်လေ .. အမှားနဲ့အမှန်ကို ဘယ်လိုခွဲခြားရမှန်းမသိဘူး။ နှစ်ဖက်လုံးကြည့်တော့ မှန်ကြတာချည်းပဲ။ ဒါပေမယ်. ကြည့်တဲ့ ရှု့ထောင့်နဲ့ .. စိတ်ထားလေးတွေတော့ ကွာသွားမယ်ထင်တယ် ... ဘာပဲပြောပြော .... လောကကြီးမှာ ..... ကောင်းတဲ့စိတ်လေးတွေ မွေးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ..................................
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 10:41 AM0comments
သင့် Blog အတွက် Flash Clock လေးလိုချင်ရင် .. ဒီကိုသွားပြီး ကြိုက်သလောက်အလကားယူပစ်လိုက်ပါ။ Flash Player မရှိရင်တော့ မမြင်နိုင်ပါဘူး။ Clock Gallery မှာ ကိုယ်ကြိုက်ရာ ပုံစံဒီဇိုင်းတွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်။ Time Setting ကိုလည်း ကြိုက်သလို ချိန်ညှိလို့ ရပါတယ်။ Try & Enjoy it ....... ;)
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 11:45 AM0comments
လောကကြီးရေ .. မင်္ဂလာပါ .. မနေ့က ထူးထူးဆန်းဆန်း ..... ကျွန်တော်နေတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ နံနက် ၉ နာရီလောက်အထိ မြူတွေ ဝေနေတယ်ဗျာ။ အရမ်းကိုနေလို့ကောင်းတယ်။ အဲ့ဒီလို အခြေအနေမျိုး မကြုံရတာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဒီနေ့က အခြားနေ့တွေထက်ပိုပြီးတက်ကြွနေတယ်လေ။ သိတယ်မလား .... လကုန်ရက်။ ဟီး ... လစာထုတ်ရမယ့်နေ့ဆိုတော့ လူက မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့ပေါ့။ လေသံလည်း နည်းနည်း မာလာသလိုပဲ ;) ။ ဒီလိုနေ့တွေမှာ ရုံးကလူတွေအားလုံးလိုလို ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေတတ်တာကို သတိထားမိတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာကိုက တခြားနေ့တွေနဲ့ မတူသလိုဘဲ။ ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော်တို့ လက်လုပ်လက်စားသမားတွေ ဒါလေးကိုပဲ မျှော်နေမိတာပေါ့။ ပြီးတော့ ဒီနေ့လစာထုတ်ပြီးရင် နက်ဖြန်လစာကို ပြန်မျှော်နေတတ်တာလည်း ကျွန်တော်တို့ အကျင့်တစ်ခုပဲမဟုတ်လား .. မဟုတ်ရင် စိတ်မဆိုးနဲ့နော်... ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောရမှာ အားငယ်လို့ အဖော်ခေါ်လိုက်တာ .. :D ..။ ဒါနဲ့ပဲ ..ညနေကျတော့ လစာထုတ်ရတာပ။ အင်.. လူဆိုတဲ့အမျိုးက အကောင်းကြိုက်လေ။ လက်ထဲ ပိုက်ဆံလေးရှိရင် ဘာမဆို အကောင်းပဲသုံးချင်ကြတာ။ အကောင်းပဲလိုချင်ကြတာ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုပဲ ..... ဒီနေ့တော့ မစီးစဘူး .... ရွှေဧည့်သည် ကားကို စောင့်စီးမယ်လို့ စိတ်ပိုင်ဖြတ်မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရုံးဆင်းတော့ မှတ်တိုင်မှာ မတ်မတ် မတ်မတ်နဲ့ လားစမ်းဟဲ့ .. ဒီနေ့တော့ ရွှေဧည့်သည် ကိုစီးပစ်မယ် လို့ စိတ်ထဲက ကြုံးဝါထားတယ်။ ၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ လာပါလေရော ။ မှတ်တိုင်ရောက်တော့ တက်မလို့လုပ်တာ .. ကိုယ်ရှေ့က လူနှစ်ယောက်အရင် တက်သွားတယ်။ ကိုယ်တက်ဖို့အလှည့်လည်းရောက်ရော ...... စပယ်ယာက .. “အကို ... မရတော့ဘူး .. လူပြည့်သွားပြီ” ဆိုပြီးတော့ ပြောပြီး တားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း “အမ်.. သြော် .. ဟုတ်လား”ဆိုပြီး နောက်ပြန်လှည့်ရတော့တာပေါ့။ သူက ပြန်ပြောတယ်. “အကို နောက်ကားက ၁၅ မိနစ်လောက်ဆိုရင် ရောက်မယ်”တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း သြော် .. စောင့်လက်စနဲ့ မထူးပါဘူး .. ဆိုပြီစောင့်နေတာ .. မိနစ် ၂၀ လောက်သာ ကြာသွားတယ်.. ရွှေဧည့်သည် က ပေါ်မလားဘူး။ ဒါနဲ့ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်။ ဒီနေ့ လစာထုတ်ရက်ဆိုတော့ ... ရုံးက နာရီဝက်လောက် နောက်ကျပြီးမှ ထွက်လာတာ။ အခုကားစောင့်တာနဲ့ ၆နာရီကျော်သွားပြီ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ .. နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်လောက် စောင့်မိတယ်။ ...... ဟော .. လာပြီဗျာ ...... ရွှေဧည့်သည်ကြီး .... အရောင်က ဟီးနေတာပဲ ..... ......။ မှတ်တိုက်ရောက်တော့ တကောင်းသားက ... ရပ်တောင်မရပ်ဘူး ..... ကားပေါ်ကြည့်လိုက်တော့ လူအပြည့် ... အား ........။ ဒုတ်ခေါးပဲ .... စီးမယ်ဆိုကာမ ...... စီးခွင့်မကြုံ .. ခါတိုင်ကျတော့ မမြင်ချင်တဲ့အဆုံး။ သြော် .. လူဘ၀ .. လိုတာမရ .. ရတာမလို...။ အနိစ္စ .. ဒုက္ခ ... အနတ္တ။ ရွှေဧည့်သည်စောင့်ရင်း ... တရားတောင် ပေါက်ချင်လာပြီ။ မထူးတော့ပါဘူး .. ကြုံရာကားနဲ့ပဲလိုက်တော့မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့နောက် ၅ မိနစ်လောက်ကျတော့ ပိုက်ပူကြီး .... မှတ်တိုင်ကို ကျွိခနဲ .. ရောက်လာတယ်။ လူသိပ်မပါဘူး။ ထိုင်ခုံနေရာတွေ လွတ်နေတယ်။ အင်း .. မထူပါဘူး .. ဆိုပြီး ... ပိုက်ပူပေါ်ပဲ တက်လိုက်တော့တယ်။ ထိုင်ခံနေရာရတာ မဆိုးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ထိုင်ပြီးလိုက်လာတာပေါ့ ..... ကားစပယ်ရာက ကားခတောင်းတော့ ၁၀၀ တန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ငါဒီနေ့ လစာထုတ်တာ ..... ၁၀၀ ပေးလိုက်တော့ မယ်... အမ်းချင်အမ်း မအမ်းချင်နေဆိုပြီးထုတ်ပေးလိုက်တာ။ စပယ်ယာက ပြူးကြည့်ပြီး “အကို နောက် ၅၀ ထပ်ပေးပါ” ... “ဟေး ..... ဘာလို့လဲကွ .... ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ၁၅၀ တောင်ယူတာလဲ” လို့မေးတော့ .. “အကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလေ .. ကျွန်တော်တို့ကားမှာ လူမှမပါတာ ... ပြီးတော့ ၇နာရီထိုးတော့မယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့က အောက်စိုက်ကားဗျ။ လိုင်းကားမဟုတ်ဘူး” ... “အမ်.... ” .. ကျွန်တော် ပြန်ဆင်းမလို့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ မပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဗျ... ဒီကောင်တွေ လူပါးဝလို့ .. ဒါပေမယ့် ... ကိုယ်ကကားပေါ်မှရောက်နေပြီ .. ဆင်းပြီးတစ်ခြားကားစောင့်ရင်လည်း အနည်းဆုံးတော့ ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာဦးမှာ .. မထူးပါဘူးဆိုပြီး .. ၅၀တန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဆင်းခါနီး ကားစပယ်ယာကို တစ်ခုတော့ လှမ်းပြောလိုက်တယ်..... “အကို .. အကို့ကားကိုလေ .. နောက်နေ့ကျရင် ဆိုင်းဘုတ်ပြောင်းတပ်လိုက်ပါလား” .. “အမ်.. ဘာဆိုင်းဘုတ်လဲ ...??? ” ..ကျွန်တော်ပြောပြီး ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်. .... “ရွှေပိုက်ပူ” အဲ့ဒီတော့မှ စပယ်ယာက စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ .. “အဟီး ... ကောင်းသားပဲ .... မဆိုးဘူး”လို့လှမ်းပြောသေးတယ် ...... ဒီလိုနဲ့ ရင်နာနာနဲ့ ပိုက်ပူကို ၁၅၀ ပေးစီးခဲ့ရတယ်လေ ................................ တွတ်ပီလိုပဲ အော်လိုက်ချင်တော့တယ်....
“ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား !!!! ”
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 10:20 AM0comments